गुल्मीका संक्रमित को ट्राभल हिस्ट्री र अबस्था – Sudarshan Khabar
गुल्मीका संक्रमित को ट्राभल हिस्ट्री र अबस्था
सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नं. ६ पुर्कोटका ४१ वर्षीय व्यक्तिमा जण्डिस र मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि रुपन्देही आएको खुलेको छ।
गाउँपालिकाको एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका उनी गाउँपालिकामा हुने सर्वदलीय बैठकहरूमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।
बिरामीको पारिवारिक स्रोतका अनुसार तम्घासबाट गाउँमा आएका साथीहरूसँग स्थानीय माछा पोखरीमा गई माछा खाएर आएपछि उनी बिरामी परेका हुन्।
माछा खाई घर फर्किएपछि वैशाखको अन्तिम सातादेखि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने जस्ता स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी गाउँपालिकामै रहेको स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको लागि पुगेका थिए। स्वास्थ्य चौकीमा चेक गर्दा टाइफाइड भएको भन्दै एक हप्ता औषधि खाई घरमै आराम गरेका थिए।
एक सातासम्म औषधि खाँदा पनि निको नभएपछि उनी पुनः स्वास्थ्य चौकी गई परीक्षण गर्दा जण्डिस देखिएपछि जेठ १ गते थप उपचारको लागि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कस्थित छाया पोलिक्लिनिकमा आएका थिए।
मदाने गाउँपालिकाका वडा नं. ६ का अध्यक्ष तोकम कुँवरले अहिलेसम्म गाउँमा कोही कोरोना संक्रमित नदेखिएको र उनी आफैं पनि कुनै क्वारेन्टाइन तथा व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा समेत नगएको अवस्थामा कसरी संक्रमण देखियो आश्चर्यमा परेको बताए।
“उहाँ स्थानीय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएकोले राहत वितरणसम्बन्धी बैठकहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पढाउँदै आएको विद्यालयमा क्वारेन्टाइन पनि थिएन, अरू क्वारेन्टाइनहरूमा पनि जानुभएको थिएन, कसरी संक्रमण देखियो हामी आश्चर्यमा परेका छौं,” कुवंरले भने।
सन्धिखर्कको छाया पोलिक्लिनिकमा चेक गर्दा जण्डिससँगै मिर्गाैलामा समेत समस्या देखिएपछि थप उपचारको लागि रुपन्देही रिफर गरिएको थियो।
पोलिक्लिनिकका संचालक दलबहादुर जिसीले पोलिक्लिनिकमा डाक्टरहरूले परिक्षण गरेपछि थप उचारको लागि रुपन्देही पठाइएको जानकारी दिए। उनी मदानेदेखि सन्धिखर्कसम्म आफन्तसँगै मोटरसाइकलमा आएका थिए।
सन्धिखर्कदेखि रुपन्देही आउँदा उनले एम्बुलेन्स चालकसँग आफूलाई मिर्गौलामा समस्या देखिएको बताएका थिए। एक जना साथीसहित आएका उनी अस्पताल आउँदासम्म गम्भीर अवस्था नरहेको ती एम्बुलेन्स चालकले बताए।
१ गते साँझ अस्पताल आई भर्ना भएका उनको जेठ २ गते नै स्वाब संकलन गरी परीक्षणको लागि पठाइएको थियो। सोही स्वाबको रिपोर्ट सोमबार पोजेटिभ आएको हो।
उनको १ गते रातिदेखि नै क्रिमसन अस्पतालको आइसियूमा राखि उपचार भइरहेको छ। अहिले उनको भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ।
आइसियूमा भर्ना भएका बिरामीमा संक्रमण देखिएपछि अहिले अस्पताल सिल गरिएको छ। अस्पतालमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालबाट बाहिर जान दिइएको छैन भने बाहिरबाट पनि अस्पतालमा कसैलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन।
उपचारका लागि आएका तर संक्रमितसँग सम्पर्कमा नआएका बिरामी र उनीहरूका आफन्तलाई भने सोधपुछ गरेर जान दिइएको छ।
एक सय बेडको उक्त अस्पतालमा ३ सय ४३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। अस्पतालमा ७ वटा न्यूरोसहित १७ वेड आइसियू रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालले नियमित रूपमा ओपिडी चलाउँदै आएको थियो भने दैनिक १ सय ५० हाराहारी बिरामी ओपिडीमा जाँच गराउन आउने गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।
यस्तै सन्धिखर्कको छाया पोलिक्लिनिक पनि अहिले सिल गरिएको छ । पोलिक्लिनिक संचालक जिसीले उपचारको लागि आएका बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रशासनलाई जानकारी गराएर पोलिक्लिनिक सिल गरिएको जानकारी दिए।